डा निरज बमलाई प्रश्न– कोभिडको अहिलेको अवस्था के हो? अस्पतालमा कस्ता संक्रमित आइरहेका छन्? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डा निरज बमलाई प्रश्न– कोभिडको अहिलेको अवस्था के हो? अस्पतालमा कस्ता संक्रमित आइरहेका छन्?
कमला गुरुङ मंगलबार, कात्तिक १६, २०७८, ०७:०६:००
काठमाडौं - नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि मानिसहरु बेपर्वाह हुँदै गएका छन्। मास्कको प्रयोग तथा सामाजिक दूरी पलनामा हेलचेक्र्याइँ गरिरहेका छैन। बढ्दो लापबारहीका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिन थालेका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छातिरोग विशेषज्ञ एवं कोभिड व्यवस्थापन समितिका सदस्य डा निरज बम कोभिड बिर्सने बेला आइनसकेको बताउँदै सचेत रहन आग्रह गर्छन्। उनका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हाल पनि दैनिक ४/५ जना संक्रमित भर्ना हुने गरेका छन्। हाल भर्ना हुने अधिकांशजसो बिरामी गम्भीर खालका रहेको उनले बताए।
कोभिडको अहिलेको अवस्था लगायतका विषयमा रहेर हामीले डा निरज बमसँग थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानीको मुख्य विषयः
नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ?
– अहिले कोरोना संक्रमण घटिरहेको छ तर अस्पतालमा भर्ना हुने क्रममा अझै पनि छ।
– त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हाल पनि दैनिक ४/५ जना संक्रमित भर्ना भइरहेका छन्।
– अस्पताल भर्ना हुनेहरुमा पनि गम्भीर खालका बिरामीहरु आइरहेका छन्।
– चाडपर्वले पनि जोखिम बढाउने भएकाले ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन।
– खोपको डोज पुरा गरेका व्यक्तिहरु पनि संक्रमित भएर अस्पताल आइरहेका छन्।
छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा पनि कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ। यसले नेपालमा पनि संक्रमण फेरि बढ्ने देखाउँछ हो?
– अवश्य पनि। ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। कुनै पनि बेला संक्रमण बढ्न सक्छ।
– भीडभाड बढेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिएको छैन।
– धेरैले मास्क लगाउन बिर्सिन थालेका छन्। जुन सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुन सक्छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कस्तो खालका बिरामीहरु बढी आइरहेका छन्?
– त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हाल धेरै अक्सिजन चाहिने, आइसीयूमा राख्नुपर्ने गम्भीर खालका बिरामीहरु आइरहेका छन्।
– निजी अस्पताल तथा जिल्लाबाट पनि रिफर भएर बिरामीहरु आउने गरेका छन्।
खोप लगाएका व्यक्तिहरुमा संक्रमणको अवस्था कस्तो पाउनु भयो?
– खोप लगाएका धेरै व्यक्तिहरुमा पनि संक्रमण भएको छ।
– तर खोप लगाएका व्यक्तिहरुमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने त्यति देखिएको छैन।
– दुवै डोज लगाएका व्यक्तिहरु वार्डमा आएर भर्ना भएको, अक्सिजनको आवश्यक परेकाहरु पनि छन्।
चाडपर्वपछि कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्ने संभावना कत्तिको देख्नु हुन्छ?
– बढ्दो चहल पहल र भीडभाडका कारण चाडपर्वपछि संक्रमण बढ्ने संभावना छ।
– अझै पनि धेरै संख्या खोपको पहुँच बाहिर रहेकाले पनि सचेत रहनैपर्छ।
कतिपय विज्ञहरुले नयाँ भेरियन्ट नआएसम्म संक्रमण बढ्दैन भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्। यसमा यहाँको बुझाई के छ?
– यो कुरा सत्य हुन सक्छ। तर हामीले फिल्डमा काम गरिरहँदा दुवै डोज लगाएका व्यक्तिहरु पनि संक्रमित भएको पाएका छौँ।
– यो अध्ययनको नयाँ विषय पनि हो जस्तो लाग्छ।
चाडपर्वलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी मनाउन सकिन्छ?
– मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गर्नुको विकल्प छैन।
– कोभिड–१९ विरुद्धको खोप धेरैभन्दा धेरैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ।
– सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउनैपर्छ।
– ढुक्क हुने अवस्था नभएकाले हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ।